TRUCK SIDE MIRROR REAR VIEW MIRROR PK9512 AUTO EXTERIOR MIRROR DOOR MIRROR FOR TOYOTA HIACE. Jereo ny toe-piainan'ny làlana amin'ny zoro maro ary mitondra soa aman-tsara ianao Mba hahatratrarana izany tanjona izany dia nametraka fifehezana kalitao hentitra izahay, fanaraha-maso, fitantanana tsara indrindra ary rafitra famatsiana tsara.
Ny zotram-pifamoivoizan'ny kamiao PK9590 dia mety amin'ny Hino. Ny teknolojia fitaratra fitaratra dia nopetahany Chrome, izay afaka misoroka tsara ny famirapiratanana ary mahatonga ny mpamily hahatsapa ho mahazo aina. Azonao atao ny mahazo "FAW", "DFAC", "Sinotruk", "Shacman", "JAC", "Hongyan", "Auman", "Foton" amin'ny vidin'ny tsena etsy ambany.
Ny fitaratra miverimberina dia iray amin'ireo singa fiarovana lehibe amin'ny vatan'ny fiara.PK9468 dia mety ho an'ny andian-tsarimihetsika MP3 an'ny Mercedes Benz. Izy io dia ampiasaina hijerena ny toetoetran'ny lalana ao ambadiky ny fiara sy ny mpamily hijerena ny vatan'ny fiara mandritra ny fizotran'ny fiara. Ny fitaratra fitaratra misy antsika dia fitaovana vaovao.
Fizaran-tsarin'ny kamiao ho an'ny mitsubishi Rosa andian-dahatsoratra MB094920 PK9849 Rearview Mirror. Ny famokarana anay dia novolavolaina hatrany araka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fenitra manara-penitra fa koa manatsara ny lojika sy ny rojom-pamatsy. Betsaka ny fitaratra nahazo mari-pahaizana E-mark sy DOT.